रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने सरल तरिकाहरु Nepalpatra रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने सरल तरिकाहरु
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने सरल तरिकाहरु
१३ चैत्र २०७६, बिहिबार
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने सरल तरिकाहरु । शरीरमा कुनै बाह्य रोगको संक्रमण होस् वा भित्री अंगहरुको खराबी आदि सबैमा रोगसँग लडेर शरीरलाई स्वस्थ्य बनाउने प्रणालीलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनिन्छ । इम्युनिटी पावर एवं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले हाम्रो शरीरमा संभावित रोगको संक्रमणबाट रक्षा गर्छ । रक्तसञ्चार बढाउनाले प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । रगत शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो । रगतले पूरै शरीरमा न्युट्रियन्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन, हिट र अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ ।
तरिका १. मर्निङ वा इभिनिङ वाक
आजभोलि मर्निङ अथवा इभिनिङ वाकमा जाने चलन धेरै प्रचलित छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने यो एक उत्तम उपाय हो । आजको व्यस्त मानव जीवनशैलीले गर्दा मानिसलाई बाहिर एकैछिन निस्किने फुर्सद हुँदैन । यस्तो बानीले शरीरको रक्तसञ्चारमा कमी आउँछ । त्यसैले साँझ अथवा बिहान फुर्सद निकालेर अनिवार्य हिँड्नु अथवा दौडिनु आवश्यक छ । यसले शरीरलाई स्फूर्त राख्छ र शरीरमा रक्तसञ्चार पनि राम्ररी गर्छ ।
तरिका २. योग र प्राणायाम
योग र प्राणायामले शरीरलाई स्वस्थ राख्न र रोगबाट बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, योग अथवा प्राणायाम गर्दा कोही जानकार व्यक्तिसँग सिकेर मात्र नियमित अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । यसले रक्तसञ्चार राम्रो हुनुका साथै प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि राम्रो विकास गर्छ ।
तरिका ३. खानपान
मानिसको खानपानसँग स्वास्थ्यको सोझो सम्बन्ध हुन्छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सन्तुलित, पोषिलो र सुपाच्य खानेकुरा खानुपर्छ । दिनभरको खानामा सकेसम्म सबै किसिमको पोषक तत्व सामेल गर्नुपर्छ । हरियो र ताजा खानेकुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अंकुरित अन्न, ड्राइ फ्रुट्स, फलफूल, सलाद, जुसको नियमित सेवन गरौ ।
तरिका ४. पौडी
पौडीलाई व्यायामको राजा नै मानिन्छ । पौडीले सम्पूर्ण शरीर सञ्चालन हुनुका साथै रक्तसञ्चार राम्ररी हुन्छ । यसले शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नुका साथै मस्तिष्कलाई पनि ताजा बनाउँछ । हामीले बटरफ्लाई स्ट्रोक, ब्याक स्ट्रोक आदि पौडीको विभिन्न विधि अपनाएर आनन्द पनि लिन सक्छौं ।
तरिका ५. सक्रिय जीवनशैली
विहान उठेपछि योग, प्राणायम, व्यायामबाट शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ । यी क्रियाले शरीर लचिलो, फुर्तिलो, बलियो हुन्छ । रक्त प्रवाह राम्ररी हुन्छ । श्वासप्रश्वास प्रक्रिया राम्ररी हुन्छ । मांशपेशी लचकदार हुन्छ । शरीरका भित्री अंगहरुको व्यायाम हुन्छ । मन शान्त हुन्छ ।
तरिका ६. साइक्लिङ
साइक्लिङले रक्तसञ्चार बढाउँछ । यसले खुट्टाको मांसपेशीलाई पनि कसिलो बनाउँछ । जसले कसरतमा त्यति ध्यान दिँदैनन् तिनीहरूको लागि यो राम्रो कसरत हुन सक्छ । हाम्रो शरीरमा रक्तसञ्चार राम्ररी भएमा प्रतिरोधात्मक क्षमता आफैं बढ्छ ।
तरिका ७. सकारात्मक मुड
तरिका ८. मसाज
मसाज अथवा शरीरको मालिस गर्नाले पनि रक्तसञ्चार राम्रो हुन्छ । मसाज गर्नाले शरीरमा स्फूर्ति र ताजापनको महसुस हुन्छ । यसले शरीरको थकान र तनावलाई हटाउन सहयोग गर्छ ।
तरिका ९. तुलसी
तुलसीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । तुलसी प्राकृतिक एन्टिबायोटिक हो । यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन एकदम सहयोग गर्छ । हरेक दिन विहान ३ वा ४ वटा तुलसीको पात सेवन गर्नुपर्छ, फाइदा मिल्छ ।
तरिका १०. खुट्टालाई माथि उठाउनु
खुट्टालाई माथि उठाउनाले रक्तसञ्चार राम्ररी हुन्छ । यसले खुट्टाको दुखाइ हटाउनुका साथै शरीरलाई पनि आराम दिन्छ । कतिपय नियमित कसरत गरिरहने मानिसहरू टाउको तल र खुट्टा माथि राखेर शीर्षासन गर्ने गर्छन् । यो रक्तसञ्चारको लागि निकै राम्रो आसन हो ।
तरिका ११. तरल पदार्थ
शरीरलाई तरल पदार्थको आवश्यक हुन्छ । मानिसले खाने ठोस पदार्थको तीन गुणा बढी तरल पदार्थ सेवन गर्नुपर्छ । तरल पदार्थमा सादा पानी सही हुन्छ । दिनभरमा कम्तीमा दुई वा तीन लिटर पानी पिउनुपर्छ । त्यसका साथै जुस, सुप पिउनुपर्छ । कतिपय फलफूलमा पनि पानीको मात्रा अत्याधिक हुन्छ ।
तरिका १२. शारीरिक सफाई
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन शारीरिक सफाई पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सकेसम्म प्रत्येक विहान उठेर चिसो पानीले नुहाउनुपर्छ । नुहाउँदा टाउकोबाट सुरु गर्नुपर्छ । यसका साथसाथै मनलाई शान्त र आनन्दित तुल्याउनुपर्छ । मनको शान्तिका लागि प्राणायाम, ध्यान जस्ता विधी सर्वोत्तम हुन्छ । सकारात्मक सोंच चिन्तनले पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ ।
तरिका १३. पानी
पानी प्राकृतिक औषधि हो । प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनाले शरीरमा जम्मा भएको सबै प्रकारको विषालु पदार्थ बाहिर निस्किन्छ र यसले प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ । सामान्य तापक्रम भएको पानी अथवा मन्द तातो पानी स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ । फ्रिजको पानीले भने स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने हुनाले यसको प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
तरिका १४. हसाई
हाँस्नाले शरीरमा भएका धेरै कोषिकाहरू खुल्छन् र रक्तसञ्चार राम्ररी हुन्छ । यसले शरीरमा अक्सिजन पनि प्रशस्त मात्रामा पुर्याउछ । तनावमुक्त भएर हाँस्नाले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्न निकै सहयोग गर्छ ।
रोग किन लाग्छ ? यस्ता छन् रोग लाग्नुको कारणहरु
रोग किन लाग्छ ? रोगको उपचार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
#रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
डा. भट्टराईलाई क्यान्सर नभएको चिकित्सकको निष्कर्ष
नेपालमै पूर्णरुपमा संचालनमा क्यान्सर अस्पताल, अब क्यान्सर उपचारका लागि विदेश जानु पर्दैन